Ukubaleka kwezothando e-Alacati, eTurkey | Izindaba Zokuhamba
Ukubaleka kwezothando e-Alacati, eTurkey
UMariela Carril | | Izindlela zokuphunyuka, Ezothando
Ugu lwaseTurkey luyindawo enhle yokuvakasha noma ukuphumula ngempelasonto ende. Ugu lwe-Aegean noma iBosphorus lusashisa impela ngo-Okthoba ngakho-ke uma ungeke ukwazi ukuhamba maphakathi nesizini le ndawo isavunyelwe.
Ugu lwaseTurkey inomoya wesiGreki futhi ama-koves alo afihla amadolobhana amaphupho namahhotela ezitolo. I-Alacati ungomunye wabo, a idolobhana elihle lolwandle ukuthi ungangeza ohlwini lwakho lwezindawo ongazithola zokubaleka kwezothando noma amaholide okuwa.
2 Ungafika kanjani e-Alacati
3 Ungahlala kuphi e-Alacati
4 Izinto okufanele uzenze e-Alacati
Kungumzana osogwini ukuthi isesifundazweni sase-Izmir eTurkey, ogwini olusentshonalanga nase-Aegean. Yasungulwa ngo-1850 lapho kulethwa abasebenzi base-Ottoman Greek abavela eziqhingini bezokhipha izindawo zikamalaleveva. Lapho lesi sifo sesinyamalele, abantu banquma ukuhlala baqale idolobha nempilo entsha, ngakho-ke besebenzisa ilanga, umhlaba ovundile nemimoya enamandla, baqala ukukhula.
Ngakho-ke, sekuphele ikhulu nesigamu izivini zayo, izakhiwo zayo zasendulo kanye nezigayo zayo beziheha izivakashi. Baye bajoyinwa eminyakeni yamuva yilabo abajwayele ukwenza i-kitesurfing noma i-windsurfing, ngenxa yokuqina kwemimoya. Kungamakhilomitha angama-72 ukusuka edolobheni lase-Izmir uqobo, ngasekupheleni kwenhlonhlo yaseCesme, futhi inokwakheka okuhle kwezindlu zamatshe nemigwaqo emincane namuhla enezitolo, izindawo zokudlela namahhotela ezitolo. Idolobhana selidume kakhulu kangangoba kunezindawo zokuhlala ezingaba ngu-80 zalolu hlobo, okubalwa kuzo amahostela namahhotela.
Maphakathi nekhulu lamashumi amabili umanduleli we-UN, i-League of Nations, wayala ukuthi kushintshwe inani labantu ngakho ngemuva kweMpi Yesibili YamaSulumane amaTurkey avela emazweni aseBalkan alethwe emzaneni futhi amaGrikhi abuyiselwa emakhaya awo eGrisi. Idolobhana lahlala likhohliwe ngesikhathi iminyaka eminingi ngakho-ke lagcinwa liphelele futhi lihle. Namuhla kuvakasha kakhulu futhi yingakho, uma ubalekela ehlobo, ekwindla kuba yindawo ezolile yokuvakashela.
Ungafika kanjani e-Alacati
Sithe lo muzi uyimizuzu engu-45 ukusuka e-Izmir, cishe ngemizuzu engama-45 uma uhamba ngemoto ukusuka e-Istanbul. Ungathatha indiza eqonde ngqo e-Izmir unyaka wonke usuka enhlokodolobha yaseTurkey ngamanani kusuka kuma-37 euros. Kukhona nezindiza eziqondile ezivela kwamanye amadolobha aseYurophu.
Kunamatekisi asuka e-Izmir Airport aya e-Alacati cishe ama-euro angama-16 futhi kukhona nensizakalo yebhasi yokuhamba nge-Havas.
Ungahlala kuphi e-Alacati
Kunezinhlobonhlobo zamahhotela namanani. Phakathi kwamahhotela abiza kakhulu, ngokwesibonelo, iManastir, ihhotela lezitolo elenziwe njengesonto, elinezicabha zokhuni nefenisha emhlophe. Inikeza amakamelo ayi-18 atholakala echibini lamamitha angama-25 kanti amanani avela kuma-liras angama-450 aseTurkey (ama-137 euros), igumbi elijwayelekile, ama-550 (ama-167 euros) i-suit ne-800 (243 euros), i-Deluxe Suit. Amanani entengo ka-Okthoba. Kufaka intela, iminibar nebhulakufesi.
Futhi kunamahhotela omndeni kuhle kakhulu, ngokwesibonelo iHhotela 1850, elisebenza esakhiweni esihle sangekhulu le-20, elibuyiselwe futhi lavuselelwa. Amanani ashibhile kunokuqala futhi afaka ibhulakufesi nezintela (phakathi kwama-euro angama-30 kuye kwangama-XNUMX). Kunamahhotela amaningi kanti amanye mahle kakhulu futhi anezintengo ezinhle ngakho-ke uma uthatha isinqumo nge-Alacati kulowo mkhakha kufanele useshe ngokuphelele ukuze uthole intengo engcono kakhulu.
Izinto okufanele uzenze e-Alacati
Yebo, ukwehluka nobungako bamahhotela asendaweni kuqinisekisa izikhathi zokuphumula. Banedamu, bayathandeka, abanye bakhiwe ezindaweni eziphakeme futhi konke kuhle. Abantu basathanda ukuchitha intambama yabo ku- amabhishi asenhlonhlo, anesihlabathi esimhlophe, agezwe ngekristalu nangamanzi aluhlaza ngandlela thile.
Kunamabhishi amaningi athandekayo futhi ungahle uhlangane nenkanyezi yebhola likanobhutshuzwayo efike ngesikhathi sonyaka ozobaleka kubathwebuli bezithombe zosaziwayo. I- Ibhishi elijabulisayoIsibonelo, inkulu futhi inkulu: amanzi asobala anesihlabathi esithambile, ungaqasha umbhede welanga nesambulela, isikebhe esincane sokuhamba noma imishini yokushayela umoya. Kepha kunezinye eziningi. I- Ibhishi laseKum Ingesinye seziseduze kakhulu nomzana futhi esinye sezisondelene kakhulu. I- Ibhishi lase-Ilica IneBlue Flag nelinye lamanzi athandwa kakhulu futhi afudumele. Kukhona futhi i- Ibhishi laseMarrakesh.
Ekwindla, uma ufuna ukusizakala ngokuthi akushisi kakhulu njengoba ngoJulayi noma ngo-Agasti, ungashayela uhambe ngemoto zazi izivini okuyimizuzu eyi-15 kuphela ukusuka. ICesme Bagcilik's yinhle futhi inombhoshongo wokubuka okunikeza ukubukwa okuhle kwe-panoramic ngenkathi unambitha iwayini labo. Ukuqhubeka negagasi le-gastronomic ekwindla, i- Umkhosi we-Flavour ngezindlela zokupheka namasiko okupheka avela e-Aegean, imiboniso, ukunambitha kanye nemihlangano yokufundisana.
Mayelana nohambo oluzungezile ungabhalisela ukuvakasha futhi wazi okudala amanxiwa omuzi wasePergamo, Amagugu Omhlaba, nenkundla yaseshashalazini yamaHellenic eyakhiwe egqumeni eyaqala ngekhulu lesi-XNUMX BC Noma noma emuva Izmir, idolobha elinezinto zalo ezihehayo: i-Yali Mosque, i-Clock Tower ka-1901, i-Museum of Modern Art, ipaki yezilwane zasendle noma i-zoo.
E-Efesu Ngenye indawo enhle, cishe imbangi efanele iPompeii. Idolobha lamaGrikhi lisukela ngekhulu le-25 BC, kwakungelaseRoma bese kuba yiByzantine ngakho-ke kunamakhulu eminyaka omlando phakathi kwalawo matshe. ISango lika-Augustus kanye noMtapo Wezincwadi waseCelsus muhle kakhulu futhi iGreat Amphitheatre enabantu abangu-XNUMX XNUMX iyamangalisa.
Ngamafuphi, ugu lwaseTurkey lufihla lezi zimangaliso nezinye eziningi. Ubuhle bokuvakashela i-Alacati ekwindla ukuthi amanani entengo ayahla, ukushisa kuyehla kanye nenani lezivakashi lehla.. Amahhotela mahle, imigwaqo yawo eboshwe ngamatshe ihlotshiswe ngamathilomu nezindawo zokudlela kanye namathafa awo agcina ubuhle bawo kuze kube nguNovemba. Ngabe amaholidi ahlala emthonjeni wenki? Yebo, i-Alacati ingaba yisixazululo ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ezothando » Ukubaleka kwezothando e-Alacati, eTurkey
Izinto ongazivakashela eMarrakech
Islas de la Bahía, ipharadesi laseHonduras eCaribbean